ubuchwepheshe Sovremennyne nezinto ezintsha is ngakho ukwakhiwa nokulungiswa umsebenzi, okuyinto cishe ingxenye eyodwa kwezintathu Khozin ekhaya uyazi indlela yokwakha indle lula, indlela ukuzula uhlelo endlini Ukushisa, njengoba emphethweni ophahleni ukubeka phansi egumbini. Sekuyisikhathi eside izazi Domestic wenza izingqondo zabo mayelana nekhwalithi plastic nensimbi-plastic amapayipi, sha best of okwakhiwa ngalo la mabhodi, futhi waqaphela ukuthi kungcono ukubeka efulethini: linoleum noma laminate. Impendulo izinga izinto, izinkampani best esikhiqiza, iseluleko wezingcweti wazibonela kanye netingcweti temsebenti yasekhaya zingatholakala ku izingosi eziningi ukwakhiwa kanye nezithangami.
amandla laminate kuyinto ekilasini uzimisele. Ukuze ezindaweni maneuverability elinganiselwe (lokulala, izingane) kungathatha 21-22 ekilasini. Ephasijini, ikhishi, igumbi lokuphumula, kuyatuseka ukusebenzisa 23 ekilasini nangaphezulu. Class 31-33 Kunconywa ukuba abeke emahhovisi, emakilasini, izindawo zomphakathi. Futhi egumbini lokuphumula, uma ungafuni ukuba babuyele ukukhanda of iminyaka engu-10, noma ngisho nangokwengeziwe. Iphuzu umpofu ngisho high quality enamathela kuyinto emalungeni waterproof yokuxhuma amapuleti. Ngakho-ke, kuyinto efiselekayo ukhethe laminate amanzi-oxosha, ogama imikhawulo kuthiwa afuthwe ngesibulali inhlaka ezikhethekile noma i-glue ukufakwa zisebenzisa yokugezela ekhishini. Yini engcono ingcina laminate noma ekhiqizwa? Guest house amakhosi sithambekele ekwenzeni ikhava yokuvala, kulula ukuba babuthane, ukuqaqa futhi esikhundleni igugile noma ephukile iphaneli uma kunesidingo.
qualitative isigubungelo phansi German baziwa kuyinto Classen. Laminate Izibuyekezo kuyinto enhle kakhulu, bathi lokhu ngenye yezinkampani ezingcono kakhulu flooring amanzi nemithi. A ezihlukahlukene omkhulu lwamaphethini nemibala (kusukela Classic kuya emahlathini exotic). Uyoba ukufakwa esheshayo, iningi ezimangelengele, futhi kulula. Futhi-ke, amanzi nemithi ukuvikelwa okungeziwe esiyingqayizivele ezivuzayo wax Izingxube ekhethekile. Konke lokhu kuye kwenza kwaba laminate ethandwa kakhulu umklamo ukubuyekezwa, bathi ngenxa yokusetshenziswa kwawo kudala Interiors yokuqala emakhishini, amakamelo okudlela angu kanye zokugezela.
Belgian Unilin Imikhiqizo Corporation Sekuyisikhathi eside kwaziwa futhi ethandwa kakhulu eRussia. Ngenxa eyiqiniso zokuvumelanisa embossed ke lokunameka ebusweni ubukeka zemvelo kakhulu. Iphaneli ekhiqizwa 7 mm awugqinsi, asetshenziswa endaweni encane (kubhavu corridor). Ngenxa emakhiyubhi ukushuba we enamathela 8 9.5 mm ezindaweni ezinkulu kungagwenywa backlash thwi. ERussia, umenzi Belgian uyakhile sethula imikhiqizo ngaphansi siqu brand laminate yayo Isinyathelo Quick. Impendulo evela kumakhasimende kanye nochwepheshe e laying bathi ukuthi lomkhiqizo kuphezulu. Ziphethe okungcono imishini isiJalimane, abasebenza izinto zokusetshenziswa izinga ezivela eBelgium naseFrance, lesi sitshalo Russian ukhiqiza umkhiqizo imingcele yayo akuzona eliphansi kuya imikhiqizo ephuma phesheya futhi isekela ngedumela laleyo nkampani nokuduma.
Lokho phansi wakhonza iminyaka eminingi, kubalulekile ukuba unakekelwe kahle futhi silondoloze laminate. Izibuyekezo yabathengi abaningi uqinisekise ngesiphakamiso izitshalo yokukhiqiza: kakhulu ukuhambisa ngokucophelela imilenze ifenisha izihlalo kanye SOFAS kufanele lemva indwangu ethambile, gwema uhamba phansi High Heels, awukwazi kuphela ziphazamisa ukuthungwa isithombe, kodwa futhi ilele. Izinzuzo laminate flooring: inhlanzeko, ukuqina, ubulula kalula ukufakwa, ikhono ukwakha design elikhulu, ukwandisa inani abalandeli yalesi izinto zokwakha zesimanje njalo ngonyaka.
Ukubhekana iphaneli PVC: ukwenza ilungelo ukulungisa yokugezela!
Sebenzisa ekwakheni ikhaya, igesi-silicate amabhlogo. Izibuyekezo nezici impahla
Barberry: ewusizo izakhiwo babe zonke izingxenye zawo
Sassy Go Go: isakhiwo, abalingiswa nabadlali "Woza!"
Indlela ukhethe kwekhanda?
Kuyini ukungafani umculo, izincwadi, izithombe kanye ifilimu?
Olunothile kwebhuloho - nendawo enkulu ngenxa yothando, futhi ukuphumula